Mbelata ụgwọ ọrụ ndị njem UK na-enye nkwalite ọhụrụ maka njem ụgbọ elu nke ụlọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ UK na -agbasa » Mbelata ụgwọ ọrụ ndị njem UK na-enye nkwalite ọhụrụ maka njem ụgbọ elu nke ụlọ
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa
Mbelata ụgwọ ọrụ ndị njem UK na-enye nkwalite ọhụrụ maka njem ụgbọ elu nke ụlọ.
Ụgbọ elu ndị nwere nnukwu ọnụnọ n'ahịa ụlọ UK ka atọrọ ka ha nweta uru kachasị na mgbanwe ndị a. A katọrọ APD ka ọ na-egbochi ndị ụgbọ elu ka ha ghara ịrụ nnukwu ụgbọ mmiri n'ime ụlọ na akụkọ a nwere ike ịtọpụ agbụ ahụ.
N'ịchọ maka njem ụlọ na-arị elu, ndị ụgbọ elu nwere ike irite uru dị ukwuu site na mbelata APD.
Mbelata na APD ga-ezute nke ọma site na ụgbọ elu ụlọ, ọkachasị ndị nwere nnukwu netwọkụ.
Ndị ụgbọ elu UK gbagoro n'iru ije ozi ebe obibi na nzaghachi maka mmụba a na-achọsi ike, ebe a ka na-ebelata ọchịchọ njem mba ụwa.
Ụgbọ elu ụgbọ elu dị na UK ga-ahụ mbelata ọrụ ndị njem ụgbọ elu (APD) dị ka ihe dị mkpa na-akwalite ụlọ ọrụ ụgbọ elu. N'ịchọ maka njem ụlọ na-arị elu, yana mbelata nke APD na 2023, ụgbọ elu nwere ike irite uru nke ukwuu.
Mbelata na APD ga-ezute nke ọma site na ụgbọ elu ụlọ, ọkachasị ndị nwere nnukwu netwọkụ. Mbelata ụtụ isi £ 7 ($ 9.65) ga-enye ndị na-ebu ibu aka ibelata ọnụ ahịa iji kpalite ọchịchọ ọzọ. Ọzọkwa, ụgbọ elu UK gbadoro ụkwụ na-eje ozi n'ebe obibi n'ihi mmụba a na-achọsi ike, ebe a ka na-ebelata ọchịchọ njem mba ụwa. Site na netwọk sara mbara, ndị njem UK nwere ike ịdị njikere ịga njem ụgbọ elu ụlọ n'ọdịniihu ozugbo mbelata ụtụ isi pụtara. Agbanyeghị, mmụba a na-achọsi ike ga-eme naanị ma ọ bụrụ na ebufere ndị ahịa ego ego n'ụdị ọnụ ahịa tiketi dị ọnụ ala.
Logan Ikuku, British Airways, na Eastern Airways nwere nnukwu netwọk ụlọ ma so na ndị egwuregwu ga-erite uru na UK na-ebelata APD ụlọ ya. Loganair ga-abụ nnukwu onye ga-erite uru, ebe ụlọ ọrụ ụgbọ elu mejupụtara oghere hapụrụ ife efe n'oge ọrịa na-efe efe. Ụlọ ọrụ ahụ ogologo oge na-achọsi ike ka APD belata, na mbelata ahụ nwere ike ịhụ ụfọdụ ụgbọ elu na-enye ụzọ ndị ọzọ ka ọnụ ahịa na-aghọwanye asọmpi n'ihe metụtara ụdị ụgbọ njem ndị ọzọ.
Ọzọkwa, ife efe 2.0 nwere ike irite uru. Ekwuru na oke uru APD dị na UK bụ isi ihe kpatara ya ife efe dara. Mbelata dị ukwuu ga-enye ọnọdụ ọrụ kacha mma maka onye na-ebu ya mgbe ọ maliteghachiri.
Maka ọtụtụ ndị njem UK, ọnọdụ ego ha agbanweela n'oge na-adịbeghị anya. Nnyocha ndị ahịa n'oge na-adịbeghị anya gosiri na 73% nke ndị zara UK nwere 'oke', 'dị nnọọ' ma ọ bụ 'nwere ntakịrị' gbasara ọnọdụ ego ha n'ihi ọrịa na-efe efe, na-egosipụta uru dị na mbelata APD.
Ụgbọ elu ụgbọ elu nwere ike ịgbalị ịkpali ọchịchọ n'oge oge mgbake COVID-19. Site na nchegbu gbasara ego dị elu, mbelata na APD ga-ekwe ka ndị na-ebu ụgbọ ala belata ọnụ ahịa ma gboo mkpa nke ndị njem na-amachaghị ego. Ọzọkwa, ndị na-aza ajụjụ UK họọrọ ikike dị ka ihe kachasị elu mgbe ha na-ekpebi ebe ha ga-aga ezumike, ebe 48% nke ndị zaghachirinụ na-ahọrọ ihe a dị ka ihe kacha mkpa.
Mbelata APD na ụgbọ elu ụlọ nwere ike ịbawanye ọchịchọ mgbe ọnụego ọhụrụ batara maka 2023. N'ime afọ abụọ, njem mba ụwa nwere ike ịnweta ndị njem UK. Mbelata ọnụ ahịa ụgbọ elu ụlọ nwere ike inyere ndị ahịa njem UK aka idowe ụfọdụ ndị njem họọrọ ezumike na UK n'oge ọrịa a.